Barcelona Iyo Manchester United Oo Laga Reebay Champions League + Sawiradii Murugada
Kooxaha Bayern Munich iyo Ateltico Madrid ayaa ku biiray Real Madrid iyo Chelsea oo noqday afarta kooxood ee isugu soo hadhay horyaalka kooxaha Yurub ee Champions League , kadib markii ay kaga guulaysteen guryohooda oo marti ay ugu ahaayeen.
Kooxda Atletico Madrid ayaa si qurux badan uga dul talaabsatay Barcelona, ciyaar aan waxba la isula hadhin oo ka dhacday garoonka Vicent Celdron ee magaalada Madrid, halkaas oo ay murugo kaga dareereen xidigihii Catalanka ee Messi , Xavi, Iniesta iyo Neymar oo waxba ka qaban kari waayay guuldaro hortooda maraysa oo ay kaga hadhayeen horyaalka ugu qiimaha badan Yurub ee UEFA Champions League.
Gool uu daqiiqadii 5 aad ee ciyaarta shabaqa dhigay ciyaaryahanka Koke, ayaa ugu filaaday Atletico inay 1-0 ku gawracdo Barcelona oo ay ciyaartii hore ee la joogay guriga Barce ee Camp Nou ay isku mari waayeen 1-1 , celcelis 2-1 ah ayay guushu caawa ku raacday At Madrid.
Labada kooxoodba waxay iska lumiyeen fursado badan oo goolal noqon karayay laakiin nasiibka uuni ka duway shabaqa.
BAYERN MUNICH 3-1 MANCHESTER UNITED (Agg: 4-2) – Dhinaca kale kooxda Manchester United oo rajo badan ka qabtay inay ku biirto Chelsea oo u gudubto wareega afarta , ayay ku dhacday guuldaro xun kadib markii ay Bayern Munich ku liqday garoonkeeda Aliaz Arena kagana badisay 3 gool iyo 1.
Mario Mandzukic, Thomas Muller iyo Arjen Robben ayaa u suurto galliyey Munich inay guul qiimo badan ka gaadho kooxda Ingiriiska ah , rajadii Moyes-na god madow ku riday.
Kulankii hore ee Old Trafford la joogay oo ku dhamaaday 1-1 kadib , United waxay rajo badan ka qabtay inay iska caabin karto Bayern isla markaana ka guulaysan karto , taas oo aakhirkii uu beeniyey tababare Pep Guardiola.
celcelis 4-2 ah ayay Bayern ugu gudubtay Semi Finalka Champions League.
Bayern Munich, Atletic Madrid , Chelsea iyo Real Madrid ayaa ku guulaystay inay kooxohoodu ka xaadiraan wareega Afarta kooxood ee hirdanku ku dhex mari doono UEFA Champions League.
‘Mararka qaarkood xiddiguhu ma Sameeyaan koox wanaagsan’ – Rakitic oo Farriin U Diray Neymar
Aubameyang Oo U Horseeday Borussia Dortmund Guushii Furitaanka Horyaalka
Liverpool Oo £100,000 Iyo Xayiraad Heshiisyada Da’yarta Ah La Saaray